people Nepal » लोडसेडिङ नभए पनि किन जान्छ बत्ती ? कुलमानले दिए दुई कारण लोडसेडिङ नभए पनि किन जान्छ बत्ती ? कुलमानले दिए दुई कारण – people Nepal
लोडसेडिङ नभए पनि किन जान्छ बत्ती ? कुलमानले दिए दुई कारण
१४ माघ, काठमाडौं । तिहारको लक्ष्मीपूजाबाट काठमाडौंमा लोडसेडिङ बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले काठमाडौं अब लोडसेडिङमुक्त भएको बताएका छन् ।
अहिले लोडसेडिङको घोषित तालिका आएको पनि छैन । तर, पनि बेलाबेला लाइन गइरहन्छ । विहीबार पर्वतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्याङ्जामा केपी ओलीले भाषण गरिरहेका बेलामा पनि झ्याप्पै लाइन गयो ।
आखिर किन यसरी झ्याप्पै लाइन जान्छ ? कसैले बिजुली काट्छ कि ? यसबारे उठ्ने जिज्ञासाको समाधान गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक छलफलमा प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले यसका दुईवटा कारण रहेको बताए ।